UPlumtree uzocasula abamaStormers | IOL Isolezwe
UPlumtree uzocasula abamaStormers
Isolezwe / 26 July 2012, 10:39am / MALIBONGWE MDLETSHE
John Plumtree head coach of the Sharks © Sabelo Mngoma/BackpagePix
UKHIYE wokushaya amaStormers eNewlands ngokuqonda komqeqeshi wamaSharks uJohn Plumtree, wukuphula umoya wabalandeli baseKapa kuqala ubenze badinwe bengaphumeleli ukunika umfutho iqembu labo elicijwa ngu-Allister Coetzee.
Lo mdlalo ozocacisa ngeqembu laseNingizimu Afrika elizodlulela kowamanqamu ombango wesicoco seVodacom Super Rugby sika-2012, uzoba seNewlands Stadium eKapa ngoMgqibelo ngo-5.05 ntambama.
UPlumtree uthe ukuze asheshe aqede ngabalandeli bamaStormers, abafana nomdlali ka-16 enkundleni, kuzomele ezakhe ziwahlasele zibekwa amaStormers njengoba benzile kumaReds e-Australia ngempelasonto edlule.
“Ukuze ungazitholi usubhekene nezimbila zithutha eNewlands kumele uqale ucasule abalandeli bakhona ungabavumeli bahlokome. Indlela yokwenza lokhu iyodwa, wukubavimbela ukuba bangalitholi ibhola ubenze bakulandele ngemuva. Yilokho esikwenze e-Australia ngesiwombe sokuqala,” kusho uPlumtree.
Indlela yamaSharks ebheke kulo mdlalo we-semi final ayizange ibe lula neze kwazise idlule kumaCheetahs emdlalweni wokugcina wamaphuzu ukuze angene esixhantini samaqembu ayisithupha asale embangweni wesicoco.
Ngemuva kwalokho iqembu laseThekwini lilibangise eSuncorp Stadium lapho lifike lanenebula khona ompetha banyakenye amaReds ngo 30-17 ngoMgqibelo emini.
Namuhla abafana bakaPlumtree balibangise eKapa, hhayi ngoba befuna ukuyozijwayeza isimo sezulu kodwa ngoba umqeqeshi wabo ufuna bavakashele imindeni yabo kwazise kunedlanzana eliqhamuka khona.
UPlumtree uthe nakuba bezimisele ngokusheshe bawangene amaStormers kodwa ngeke bazixake ngokuthi wona adlala kanjani ngoba lokho kuzobe kusho ukuthi kumele bachithe imizuzu yokuqala bebukela futhi belandela ibhola.
“Kulesi sigaba somqhudelwano kufanele ukukhohlwe ukuthi udlala ekuhambeni. Ngeke sizixake ngokuthi bona bafuna ukudlala ngokukhahlela ibhola isikhathi esiningana noma bafuna ukusihlasela ngokusuka nalo emuva noma bafuna ukusivalela emgqeni wethu ka-22. Sizogxila kokumele sikwenze,” kusho uPlumtree.
La maqembu azoya kulo mdlalo esazi kahle ukuthi azobhekana nobani kowamanqamu kwazise i-semi final yokuqala phakathi kweChiefs neCrusaders izodlala ngoLwesihlanu ngo-8.30 ekuseni.
Kule sizini amaStormers yiwona acoshe amaphuzu amabhonasi amancane kunawo wonke amaqembu kodwa yiwona anqobe imidlalo eminingi kunawo wonke amaqembu futhi awakaze ashaywe ekhaya.